Sida loo tweak 3D Touch, feature la jecel yahay Apple u muuqataa in la dilay | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo hagaajiyo 3D Touch, astaanta la jecel yahay Apple waxay u egtahay in la dili doono
Sida loo hagaajiyo 3D Touch, astaanta la jecel yahay Apple waxay u egtahay in la dili doono
Apple waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa inaysan diyaar u ahayn inay ka takhalusto 3D Touch. Aragtidaydu waxay tahay in ay ku dheggan tahay, la dayacay oo aan la jeclayn, weligeed badan. Sida Dashboard-ka macOS. (Haa, Dashboardka wali wuu jiraa.)
Taasi waxay noqon doontaa ceeb, sida 3D Touch runtii waa wax aad u fiican oo lagu kordhinayo aaladda taabashada taabashada. Sidoo kale waa wax la hagaajin karo. Waa kan sida loo hagaajiyo sida ay u shaqeyso, iyo - haddii aad runtii neceb tahay - sida loo damiyo 3-D Taabasho gebi ahaanba.
3D Touch sidoo kale waxay leedahay habayn
Madaxa Guud ahaan> Helitaanka> Taabasho 3-D, oo fiiri fursadahaaga:
Halkan ku beddel 3D Touch.
Xagga sare waa furaha ugu weyn. Beddel kan oo mar dambe ma awoodi doontid inaad ku raaxaysato/ku dhibtoonayso 3D Touch. Laakin xitaa haddii aad marmar aad uga cadhooto in doorashooyin kala duwan ay soo baxaan "si aan toos ahayn," waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad ka tagto.
Haddii 3-D Touch uu kiciyo marka aadan sidoo kale rabin, waxaa jira saddex shay oo aad sameyn karto. 1. Gebi ahaanba demi, sida dhallinta caajiska ah. 2. Jooji cadaadiska si adag on your iPhone. Maaha fogaanta TV-ga ee baytariyadu ka dhamaanayaan. Ama 3. Hagaaji dareenka 3D Touch.
Sida loo hagaajiyo dareenka 3D-Touch
Sida aad ku arki karto shaashadda, 3D Touch waxay leedahay saddex heer oo xasaasi ah. Iftiin, Dhexdhexaad, iyo Firm. Isku day iyaga isla markaaba shaashadda dookhyada. Kaliya dhaqaaji dareeska, ka dibna taabo sawirka si aad ugu yeedho fiirsiga oo soo booda.
Hadda waxaan haystaa tayda Firm. Waxaan jeclahay 3D Touch, laakiin sidoo kale waxaan ogaaday inaan si qalad ah u eegay isku xirka Safari marka waxa aan rabo ay tahay in liiska macnaha guud uu u muuqdo si aan u wadaago xiriirka. Waan ku faraxsanahay haddii aad ku meelayn karto 3-D Touch press si aad u furto xaashida wadaaga, laakiin tani waxay ii tahay xalin fiican.
Waxaan u maleynayaa in Apple ay sii wadi doonto taabashada 3-D. Dadka qaarkiis waxay tilmaamayaan iPhone XR inay tahay caddaynta dhimashadiisa mustaqbalka - XR waxay isticmaashaa cadaadis-dheer iyo tarjumaad farsamo oo software si ay ugu ekaato taabashada 3-D oo leh shaashad aan cadaadis lahayn. Waxaa loo yaqaan Haptic Touch.
Laakiin haddii Apple ay rabto inay disho 3-D Touch, maxaad u dhibaysaa hirgelinta habkan cusub? Oo maxaa keenay gabi ahaanba iPadka? Waxaa laga yaabaa in shaashadaha xasaasiga ah ay baaba'aan, iyo 3-D Touch waxaa loo hirgelin doonaa Haptic Touch, laakiin taasi dhab ahaantii macno ma leh. Ilaa iyo inta shaqada asaasiga ahi ay weli jirto, waan farxi doonaa.
Sida Loo Sameeyo Dukaanka 'Catalog Keliya' gudaha WooCommerce
7 Siyood Oo Looga Dhexgalo SEO-ga IT